သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ခေါင်းစဉ်မဲ့ - ၂
ကံအကြောင်းမလှတဲ့ ကျွန်မတို့ တိုင်းပြည်လေးရဲ့ ဆန်အိုးကိုမှ ၀င်မွှေသွားတဲ့ နာဂစ်ထွက်ခွာသွားတာ ရက်သတ္တပတ်ကျော်ခဲ့ပါပြီ။ အိပ်ရာနွေးနွေးပေါ်မှာ အိပ်နေတဲ့အခါတွေမှာ၊ ထမင်းဟင်းကောင်းတွေစားနေတဲ့အခါတွေမှာ၊ ဗိုက်ဟောင်းလောင်းနဲ့ ကိုယ့်လူမျိုးတွေ၊ တုန်ခိုက်အေးခဲနေမကောင်းဖြစ်နေမယ့် ကလေးလေးတွေ၊ အုန်းလက်လေးတွေပေါ်မှာ နောက်ဆုံး လှဲလျောင်းသွားတဲ့ ၀၀ဖြိုးဖြိုး ချစ်စရာကလေးလေးတွေကို တွေးမိပြီး၊ အိပ်မက်ဆိုးတွေနဲ့အတူ၊ ချွေးသီးချွေးပေါက်တွေနဲ့ နိုးထလာရတဲ့ နံနက်ခင်းတွေလဲများပါပြီ။
ဆိုက်ကလုံးဝင်မွှေသွားတာ နားလည်နိုင်ပါတယ်။ သဘာဝအန္တာရယ်တွေကြားမှာ ဒီလိုပဲ ရုန်းကန်အသက်ရှင်ကြရင်း အချိန်တန်တဲ့အခါ၊ လောကကြီးထဲက နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်ခွာသွားကြရတာ ဆန်းကျယ်တဲ့ ကိစ္စတစ်ရပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြုပြင်ပြင်ဆင်လို့ရနိုင်တဲ့ အရာတွေကို လုပ်နိုင်ရက်သားနဲ့၊ လူသားအချင်းချင်းလုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တာကို၊ ကူညီသင့်ကူညီထိုက်တာကို မလုပ်လို့၊ မကူညီလို့ မလိုအပ်ပဲ ရေတိမ်မှာနစ်ရတဲ့ အဖြစ်တွေကိုတော့ နားမလည်နိုင်အောင်ပါပဲ။
ရေတပ်က ရေယာဉ်တွေ ပျက်စီးနစ်မြုပ်သွားတယ်၊ ရေတပ်က စစ်ဗိုလ်အချို့နဲ့ စစ်သားတွေရယ်၊ ဟိုင်းကြီးကျွန်းက တပ်အချို့ပျက်စီးသွားတယ်ဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်မကောင်းပါဘူး။ အဲဒီကတည်းက ဒီဆိုင်ကလုန်းကို လုံးဝလျော့တွက်လိုက်ကြတယ်ဆိုတာ သိသာပါတယ်။ ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေမှာ ကြီးမားတဲ့ တာဝန်ပုံကျနေပေမယ့် ဘယ်သူမှ တာဝန်မယူတဲ့အပြင်၊ သိပ်ရက်စက်လွန်းတဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို မြင်နေရပါတယ်။ ဒီခေါင်းဆောင်တွေ နေရာမှာ တစ်ခြားနိုင်ငံက လူတွေဆိုရင် တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် နှုတ်ထွက်စာ တင်ကုန်လောက်ပါပြီ။ တစ်ကယ်တော့ စစ်သားလေးတွေနဲ့ သူတို့မိသားစုတွေဟာလဲ ပြည်သူတွေနဲ့ ဘာမှမထူးပါဘူး။ ငတ်နေကြတာပါပဲ။ ပိန်လိန်နေကြတာပါပဲ။ အမိန့်နာခံရတဲ့ စစ်သားတွေဟာ စစ်ဗိုလ်တွေရဲ့ ကျွန်သာသာပါပဲ။ စိတ်ကောင်းရှိတဲ့ စစ်ဗိုလ်မိသားစုအိမ်မှာ တာဝန်ကျရင်ကံကောင်းမယ်၊ စိတ်ဓာတ်ညံ့ဖျင်းတဲ့ စစ်ဗိုလ်မိသားစုအိမ်မှာ တာဝန်ကျရင် ကံဆိုးမယ်ပေါ့။ ဒီလောက်များတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေထဲမှာ သနားကြင်နာတတ်တဲ့၊ သတ္တိရှိတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်တစ်လေမှ မပါတော့ဘူးလားလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကျွန်မတို့တိုင်းပြည် ဆင်းရဲပါတယ်။ ကုန်းကောက်စရာမရှိအောင် ဆင်းရဲပါတယ်။ ဒါကို ကမ္ဘာကို မမြင်စေချင်တာလား၊ မြစ်ထဲမှာ အလောင်းတွေမျောနေတာကို မမြင်စေချင်တာလား။ အကုန်လုံးက မြင်ပြီးပါပြီ။ သူတို့လှုထားတာတွေကို တံဆိပ်တွေပြောင်းကပ်တာတွေကိုလဲ အကုန်က သိပြီးပါပြီ။ ဒါကိုလဲ ရုံးတွေမှာ တဖွဖွ မယုံနိုင်သံနဲ့ပြောနေကြပါတယ်။ တစ်ကယ်တမ်းအရေးနဲ့အကြောင်းနဲ့ဆိုရင် ဧရာဝတီတိုင်းနဲ့ ရန်ကုန်လမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာ ကွန်ဗွိုင်းတွေ တန်းစီမနေတာ၊ လူနာတင် ရဟတ်ယာဉ်တွေ၊ ရေပေါ်လျှပ်တိုက်ယာဉ်တွေ၊ လူနာတင်ကားတွေ ဘာမှမရှိတာ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် အော်တိုမစ်တစ်သစ်ပင်ကြိတ်စက်လေးတစ်ခုတောင် ရှိမနေတာ၊ တိုင်းပြည်မှာ လွှနဲ့ဓားမကလွဲလို့ ဘာဆိုဘာမှမရှိတာ၊ လှုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကို ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကို မပေးပဲ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းယူပြီး ဈေးမှာရောင်းစားကြတာတွေကို ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတွေ မသိဘူးပဲထား ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကတော့ သိသွားပါပြီ။ ဒီလိုလာရောင်းစားတာကို မည်သူကမှ မ၀ယ်ပဲ တောင့်ခံထားနိုင်မယ်ဆိုရင်… ၊ ကြီးနိုင်ငယ်ညှင်းလုပ်ရပ်တွေကို စစ်ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသား အရေးယူမယ်ဆိုရင်…
ကြည့်မိတဲ့ သတင်းတွေထဲအရ မြန်မာပြည်ထဲမှာ ရိုးသားလွန်းလို့၊ မြန်မာစကားတောင် ထမင်းစားရေသောက်လောက်ပဲ တတ်တဲ့ ဗမာတွေကိုမြင်ရတော့ အံ့သြသွားမိတယ်။ ဒါထားပါတော့….။ စစ်ဖိနပ်ပြောင်ပြောင်ရောင်ရောင်တွေဝတ်ပြီး၊ နွမ်းပါးအားငယ်နေတဲ့ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေရှေ့မှာ ပါးစပ်ဟလိုက်တဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်နဲ့ သူ့ဘေးကတစ်ခြားစစ်ဗိုလ်တစ်ဦးရဲ့ နှုတ်ကထွက်လာတဲ့ စကားတွေကို ကြားရတော့ ပိုအံ့သြသွားပါတယ်။ အရင်ကတော့ ပြည်သူတွေအတွက် ၀မ်းနည်းကြေကွဲကြောင်း သူတို့အနေနဲ့ သတင်းမှာဖြစ်ဖြစ် အနည်းဆုံးပြောရင်ကောင်းမယ်လို့ စဉ်းစားမိခဲ့ပေမယ့်၊ အခုတော့ သူတို့ ပါးစပ်မဟတာ၊ မိန့်ခွန်းတွေ မပြောတာ၊ ကုန်ကုန်ပြောရရင် ဘာစကားကို ဘယ်တော့မှ သူတို့မပြောတာ အကောင်းဆုံးပါပဲလို့ ခံယူလိုက်ပါတယ်။
ကူညီပေးတဲ့ နိုင်ငံရပ်ခြားက အဖွဲ့အစည်းတွေက၊ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ ခွင့်ပြုချက်
မပါပဲ၊ လေယာဉ်တွေပေါ်ကနေ ပစ္စည်းတွေကျဲချဖို့ အစီအစဉ်တစ်ခုကို၊ တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းက တရားဝင်ဖြစ်စေရန်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့ ၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးက ကုလသမ္မဂမှာ၊ အဆိုပြုတင်သွင်းတာကို ဗီယက်နမ်၊ တောင်အာဖရိက၊ ရုရှားနဲ့ တရုပ်က ကန့်ကွက်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီ R2P (Responsibility to Protect) လို့ခေါ်တဲ့ doctrine ကို လွန်ခဲ့တဲ့ရှစ်နှစ်လောက်က ကနေဒါနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး လွိုက်အက်စ်ဝေါသီးက စတင်အဆိုပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာ ပြည်သူတွေကို ထိုတိုင်းပြည်က ကာကွယ်နိုင်ရန် ခွန်အားမရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ လုံးဝမကာကွယ်ပေးလျှင်ဖြစ်စေ၊ အခြားတိုင်းပြည်များက ကူညီဝင်ရောက်ကူညီနိုင်သည့် doctrine တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အခြားသော သွေးသာမတော်စပ်တဲ့ တိုင်းပြည်ခေါင်းဆောင်တွေကတောင် ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက်၊ ဒီလောက် ပူပင်သောကရောက်နေချိန်မှာ သောကရောက်သင့်သူတွေက မရောက်တာကိုလဲ အံ့သြမိပါတယ်။
မိသားစုဝင်တွေသေဆုံးလို့ ငိုကြွေးပူဆွေးချိန်မရတဲ့ လူတွေရဲ့၊ နှစ်လုံးသားထဲမှာ တစ်သက်တာကျန်မယ့် စိတ်ဒဏ်ရာတွေကို၊ု ဘယ်လို ကူညီကုစားမလဲလို့ သူတို့အနည်းငယ်မျှစိတ်ပူမိပါသလား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ အနာဂတ်ကြယ်လေးတွေ အများကြီး လွင့်သွားတာကိုကော နှစ်မျောပါရဲ့လား။
မြန်မာပြည်ရဲ့ ဆန်အိုးကြီးမှောက်သွားတာကိုကော နှစ်မျောကြပါလား။
ကမ္ဘာ့မြေအနေအထားတွေပြောင်းလို့၊ ရာသီဥတုတွေပြောင်းလို့ ဘင်္ဂလားဒေရ်ှကို အမြဲဝင်နေတဲ့ ဆိုင်ကလုန်းတွေ၊ လမ်းကြောင်းပြောင်းလို့ မြန်မာပြည်ကိုပဲ နောက်ပိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုရင် ဘာတွေလုပ်ကြမလဲဆိုတဲ့ အစီအစဉ်တွေ တွေးမိပါလား။
လေယာဉ်ကွင်းမှာ လှုထားတဲ့ပစ္စည်းတွေ ဒီအတိုင်းပဲ တောင်လိုပုံနေတယ်၊ ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေ မကောင်းတဲ့ဆန်တွေနဲ့ မှိုတက်နေတဲ့ ပေါင်မုန့်တွေကိုပဲစားနေရယ်လို့ကြားတော့ ဆက်လက်လှုချင်စိတ်တွေ ပျောက်သွားတယ်။ ဒီကြားထဲ တရုပ်ပြည် ဆီချွမ်ပြည်နယ်ငလျင်ဒဏ်သင့်သူတွေဘက်ကို၊ အလှုရှင်တွေက အာရုံရောက်သွားတယ်။ ဒီရက်တွေမှာ ဘာမှလုပ်ချင် ပြောချင်စိတ်မရှိ၊ ငယ်ငယ်တည်းက (ရှေ့ဆောင်လူငယ်၊ လမ်းစဉ်လူငယ်၊ NLD) စတဲ့ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းကိုမှ ဘယ်တုန်းကမှ ၀င်ရောက်ခြင်းမရှိသော၊ စစ်အာဏာရှင်ကိုလုံးဝမလိုလားသော၊ တစ်ဦးတည်းရပ်တည်နေသော၊ ရသစာပေကိုသာရေးလိုသော၊ ကျွန်မရဲ့ဘလော့ဂ်လေးဟာ စက်တင်ဘာကတည်းက သွေးစွန်းပြီးသားမို့ ယခုမျက်ရည်တွေ ထပ်စွန်းလဲ ထူးမည်မဟုတ်တော့ပါ။
စာရေးသူ--> တစ်ပြည်သူ အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 1:05 AM
အိမ့်ရေ…ခေါင်းစဉ်မဲ့နဲ့ အတူ….စကားလုံးတွေမဲ့…နှလုံးသားတွေနာကျင်…အိပ်ပျက်ညတွေ…တကယ်ကို ကယောင်ချောက်ချားပါပဲ…
အခု မျက်ရည်တွေ ထပ်စွန်းလည်း ထူးတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူးလေ မျက်ရည်တွေသာခမ်းသွားမယ် အသိစိတ်မရှိတဲ့ သူတွေကြောင့် လူတွေ ဒုက္ခရောက်နေကြအုံးမှာပါပဲး(( ...အိပ်ပျက်ညတွေများပြီး သေဆုံးသူတွေရဲ့ ပုံ၇ိပ်တွေကို မြင်ယောင်နေတယ် ။
yeah,Ma Lay,I really feel the sorrowness for the public as much as you do.I've had tears on my face foracouple of times and been crying while I was writing this comment.
ကူညီသူမဲ့နေရှာတဲ့ ဘ၀တွေကို ဒီအတိုင်းကြည့်နေရတယ်.. မလေးရယ်
This is the example.If any state,any place,even yangon city,get another disaster,these people will be treated like this.Not only irrawaddy delta,but also all place in Burma.
This is Buddist country.Dont have to worry,
Our country country mountains are hight,so the birds can not pass over.Dont have to worry bird flu.Thats what these stupid generals said.